ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: ပြေးခဲ့ခြင်းများ မနက်ဖန်
ငယ်ငယ်တုန်းက စာမရရင် ရိုက်တဲ့ကျောင်းမှာ မနေချင်ဘူး အမေ
သားကို မေမေစာသင်ပေးရင်လဲရ ရဲ့သားလို့.
အဖေကို မူဆိုလိုနီထင်လို့ အိမ်ကပြေး
အချစ်ကတော့ ကျနော့်ဆီက ပြေးတာပါအမေ…
လွယ်အိပ်နဲ့ အမှန်တရားက လွဲလို့ဘာမှမရှိတဲ့ အခါ.
ပြေးပြီးရင်းပြေး မနားတမ်းပြေး မမောတမ်းတော့မပြေးနိုင်ပါဘူး အမေ
အမေ မရှိတဲ့အရပ်ဆီ အမေ့ကိုထားပြီးပြေး.
အမေ့ကိုလဲ ထောင်ဝင်စာလေး မှန်မှန်မပို့နိုင်ပါဘူး..အမေ.
အမေကြိုက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်လေး ဈေးတက်သွားပြီတဲ့..
အမေကြိုက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်လေး ဈေးတက်သွားခဲ့ပြီ။ ။
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 1:17 AM
Nge Naing, January 9, 2010 at 2:52 AM
ကိုချစ်ဖေ အမေက ဘယ်မှာလဲ။ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီက တဆင့် ဆက်သွယ်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။
ကိုလူထွေး, January 9, 2010 at 3:16 AM
အခုတော့ လက်ဘက်ရည်တွေ ထွက်ပြေးနေပြီပေါ့ လေ...း(
ကိုချစ်ဖေ, January 9, 2010 at 5:19 AM
ဟုတ်တယ်ကိုလူထွေး လက်ဘက်ရည်တွေလဲပြေး အကြော်တဲလေးလဲပြေး အကုန်ပြေး...ပါပဲ..
Ko Toe Gyi ( Multiply Boo Boo Gyi ), January 9, 2010 at 11:08 AM
ကိုယ့်နောက်က လိုက်နေတဲ့သူတွေကို မှီလာတဲ့တနေ့
သားအလှည့်မှာ အမေ့ကိုထောင်ဝင်စာလေးမပို့ နိုင်တောင်မှ
ရွှေရတုမှတ်တမ်း, January 9, 2010 at 12:51 PM
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ), January 9, 2010 at 3:00 PM
ဆောင်းယွန်းလ, January 10, 2010 at 9:09 AM
ဒီလိုပဲ ပြေးနေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ
နောင်ဆို စကြာဝဠာပြေးတောင် ဖြစ်ဦးမလားမသိဘူးဗျာ
tin min htet, January 16, 2010 at 6:14 AM
ပြေးခဲ့ခြင်းများ မနက်ဖြန်ဆိုတော့ ..
မနက်ဖြန်တွေမှာရော ဆက်ပြေးနေကြရဦးမှာလား ..